Dear Leader လား၊ Cheerleader လား
15 Feb 2018 . 1:46 PM
၂၀၁၈ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ဟာ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတို့ကြား ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတတစ်ခုလို့ ရှုမြင်ခံနေရပါတယ်။ အားကစားနဲ့အတူ အမုန်းတရားလျှော့ချရေး စီမံကိန်းကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ Pyeongchang ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်မှာ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဖော်ကျူးနေတာပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရေခဲပြင်ဟော်ကီပွဲစဉ်တစ်ခုမှာ မြောက်ကိုရီးယား Cheerleader တွေ အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ရပ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Dear Leader လို့ဆိုရမယ့် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန် (Kim Jong un) ကိုတွေ့ခဲ့ရလို့ပါပဲ။ အစောပိုင်းမှာ ရေခဲပြင်ဟော်ကီပွဲစဉ်တစ်ခုမှာ မြောက်ကိုရီးယား Cheerleader တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးအစစ်လို့ ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကင်မ်ဂျုံအန် (Kim Jong un)နဲ့ ဆင်တူသူတစ်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မ်ဂျုံအန် (Kim Jong un)အစစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကင်မ်ဂျုံအန် (Kim Jong un)အတုက သူ့ကိုယ်သူ ဟောင်းဝက်ဘ် (Howard) လို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာနေရာမှာ စကားတချို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ဟောင်းဝက်ဘ် (Howard)က တရုတ်သွေးနှောသူတစ်သီးဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံကလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်သောကြာနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာလည်း သူနဲ့ အတူ အမေရိကန်သမ္မတ ထရန့် (Trump) ပုံစံတူ ၀တ်စုံပြည့်ဆင်မြန်းထားသူတစ်ဦးတက်ရောက်ခဲ့လို့ လုံခြုံရေးတွေ အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ရသေးတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန် (Kim Jong Un)
မြောက်ကိုရီးယား Cheerleader တွေအတွက်လည်း ဟောင်းဝက်ဘ် (Howard)ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ငိုရခက်၊ ရယ်ရခက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူတို့တွေက ကင်မ်ဂျုံအန် (Kim Jong un) အစစ်ထင်ပြီး စကားရဲရဲမပြောနိုင်၊ အသံကျယ်ကျယ်မရယ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အထိ ကြောက်စိတ်တွေဝင်နေခဲ့တာပါပဲ။ ပြီးတော့ မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေရဲ့ ကြွေးကြော်သံ၊ We are One. Unify the motherland ဆိုတာတွေကို ထပြီးအော်သူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ဟောင်းဝက်ဘ် (Howard)က စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပုံပဲ။ “ ဘယ်သူမဆိုလူသားဆန်စွာနေထိုင်သင့်တယ်။ တောင်ကိုရီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြောက်ကိုရီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးဟာ ကြောက်စိတ်နဲ့ ထိန်းချုပ်ခံထားရလေ့ရှိတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား Cheerleader တွေရဲ့ အဖြစ်ကလည်း Dear Leader ကင်မ်ဂျုံအန် (Kim Jong un) ထင်ပြီး စိုးထိတ်ခဲ့ရပေမယ့် Cheerleader လို သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကင်မ်ဂျုံအန် (Kim Jong un)အတုနဲ့ ဆုံခဲ့ရလို့ ငိုရအခက်၊ ရယ်ရအခက်ပါပဲ။
၂၀၁၈ ဆောငျးရာသီအိုလံပဈဟာ တောငျကိုရီးယားနဲ့ မွောကျကိုရီးယားတို့ကွား ငွိမျးခမျြးရေးသင်ျကတေတဈခုလို့ ရှုမွငျခံနရေပါတယျ။ အားကစားနဲ့အတူ အမုနျးတရားလြှော့ခရြေး စီမံကိနျးကို တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ၊ Pyeongchang ဆောငျးရာသီအိုလံပဈမှာ ကိုရီးယားနှဈနိုငျငံဖျောကြူးနတောပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ရခေဲပွငျဟျောကီပှဲစဉျတဈခုမှာ မွောကျကိုရီးယား Cheerleader တှေ အံ့အားသငျ့စရာဖွဈရပျနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ Dear Leader လို့ဆိုရမယျ့ မွောကျကိုရီးယားခေါငျးဆောငျ ကငျမျဂြုံအနျ (Kim Jong un) ကိုတှခေဲ့ရလို့ပါပဲ။ အစောပိုငျးမှာ ရခေဲပွငျဟျောကီပှဲစဉျတဈခုမှာ မွောကျကိုရီးယား Cheerleader တှဟော သူတို့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျကွီးအစဈလို့ ထငျမှတျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ကငျမျဂြုံအနျ (Kim Jong un)နဲ့ ဆငျတူသူတဈဦးသာဖွဈပါတယျ။ ကငျမျဂြုံအနျ (Kim Jong un)အစဈမဟုတျပါဘူး။ ကငျမျဂြုံအနျ (Kim Jong un)အတုက သူ့ကိုယျသူ ဟောငျးဝကျဘျ (Howard) လို့မိတျဆကျပေးခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲကငျြးပရာနရောမှာ စကားတခြို့ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။ ဟောငျးဝကျဘျ (Howard)က တရုတျသှေးနှောသူတဈသီးဖွဈပွီး သွစတွေးလနြိုငျငံကလာတယျလို့ သိရပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျသောကွာနကေ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ဆောငျးရာသီ အိုလံပဈဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားမှာလညျး သူနဲ့ အတူ အမရေိကနျသမ်မတ ထရနျ့ (Trump) ပုံစံတူ ဝတျစုံပွညျ့ဆငျမွနျးထားသူတဈဦးတကျရောကျခဲ့လို့ လုံခွုံရေးတှေ အလုပျရှုပျခဲ့ရသေးတယျ။
မွောကျကိုရီးယားခေါငျးဆောငျ ကငျမျဂြုံအနျ (Kim Jong Un)
မွောကျကိုရီးယား Cheerleader တှအေတှကျလညျး ဟောငျးဝကျဘျ (Howard)ရဲ့ လုပျရပျကွောငျ့ ငိုရခကျ၊ ရယျရခကျဖွဈခဲ့ရတယျ။ သူတို့တှကေ ကငျမျဂြုံအနျ (Kim Jong un) အစဈထငျပွီး စကားရဲရဲမပွောနိုငျ၊ အသံကယျြကယျြမရယျနိုငျဖွဈခဲ့ရတဲ့အထိ ကွောကျစိတျတှဝေငျနခေဲ့တာပါပဲ။ ပွီးတော့ မွောကျကိုရီးယားပွညျသူတှရေဲ့ ကွှေးကွျောသံ၊ We are One. Unify the motherland ဆိုတာတှကေို ထပွီးအျောသူတှလေညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။
သူတို့ကိုကွညျ့ပွီး ဟောငျးဝကျဘျ (Howard)က စိတျမကောငျးဖွဈသှားပုံပဲ။ “ ဘယျသူမဆိုလူသားဆနျစှာနထေိုငျသငျ့တယျ။ တောငျကိုရီးယားပဲဖွဈဖွဈ၊ မွောကျကိုရီးယားပဲဖွဈဖွဈ” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ အာဏာရှငျတှလှေမျးမိုးခြုပျကိုငျထားတဲ့ နိုငျငံမှာ လူ့အခှငျ့အရေးဟာ ကွောကျစိတျနဲ့ ထိနျးခြုပျခံထားရလရှေိ့တယျ။ မွောကျကိုရီးယား Cheerleader တှရေဲ့ အဖွဈကလညျး Dear Leader ကငျမျဂြုံအနျ (Kim Jong un) ထငျပွီး စိုးထိတျခဲ့ရပမေယျ့ Cheerleader လို သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ကငျမျဂြုံအနျ (Kim Jong un)အတုနဲ့ ဆုံခဲ့ရလို့ ငိုရအခကျ၊ ရယျရအခကျပါပဲ။